Git Sangit News » स्मार्टफोन भन्दा आइफोन १ सय ६७ गुणा असुरक्षित
स्मार्टफोन भन्दा आइफोन १ सय ६७ गुणा असुरक्षित
एप्पलको आइफोनको प्रयोगकर्ताहरूका लागि दुखद् खबर छ । हालै प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार अन्य ब्राण्डका स्मार्टफोनहरूको तुलनामा आइफोन साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यधिक असुरक्षित भएको पाइएको छ । रिपोर्ट अनुसार एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको तुलनामा आइफोन ह्याक हुने जोखिम १ सय ६७ गुणा अत्यधिक रहेको छ । स्मार्टफोनको खोल बनाउने बेलायती कम्पनी केस डट ट्वान्टीफोरले गरेको अध्ययनले आम धारणा विपरीत आइफोन निकै असुरक्षित रहेको देखाएको हो ।
बेलायती प्रयोगकर्ताले गर्ने गुगल सर्चको मासिक सर्च भोल्यूम डाटा संकलनपश्चात् गरिएको विश्लेषणका आधारमा कम्पनीले रिपार्ट तयार गरेको हो । प्रयोगकर्ताले स्मार्टफोन ब्राण्ड तथा कुनै एपलाई ह्याक गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने बारेमा गुगलमा गरेका सर्चको तथ्यांकलाई कम्पनीका शोधकर्ताहरूले अध्ययनको आधार बनाएका थिए ।
रिपोर्ट अनुसार १० हजार ४० जना प्रयोगकर्ताले आइफोन कसरी ह्याक गर्ने ? भन्ने कुरा गुगलमा खोजी गरेका थिए । त्यस्तै सामसुङका स्मार्टफोन ह्याक कसरी गर्ने ? भन्ने कुराको खोजी गर्नेको संख्या चाहीँ जम्मा ७ सय मात्रै थियो ।
इन्स्टाग्रामलाई सर्वाधिक जोखिम – फोटो शेयरिङ एप इन्स्टाग्राम सबैभन्दा धेरै ह्याकरहरूको तारो बनेको पाइएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार १३ हजार ३१० प्रयोगकर्ताले कसै न कसैको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट कसरी ह्याक गर्ने भन्ने तरिकाका बारेमा गुगलमा खोजी गरेको पाइयो ।
धेरै मानिसले ह्याक गर्न चाहने एपको दोस्रो स्थानमा स्नापच्याट रहेको छ भने तेस्रो स्थानमा ह्वाट्सएप रहेको छ ।
त्यस्तै, कम जोखिम भएका अन्य एपहरूमा फेसबुक, अमेजन र नेटफ्लिक्स रहेका छन् । फेसबुक ह्याक गर्ने उपायको बारेमा १ हजार १ सय २० जनाले गुगलमा खोजी गरे भने अमेजनका बारेमा १ हजार ७० जनाले खोजी गरेका थिए । शोधकर्ताहरूका अनुसार नेटफ्लिक्सको तुलनामा इन्स्टाग्राम अकाउन्ट ह्याक हुने सम्भावना १६ गुणा धेरै छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।
प्रकाशित मिति १४ पुष २०७६, सोमबार १९:१७